Yenza, Yabelana kwaye uChaphazele iiKPIs zakho zeShishini | Martech Zone
Yenza, Yabelana kwaye uChaphazele iiKPIs zakho zeShishini
NgoMgqibelo, Agasti 3, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Omnye wemicimbi bendihlala ndinayo kubahlalutyi Kungenxa yokuba abathengisi bacinga ukuba ukupakisha ngakumbi nangaphezulu kwemilinganiselo yindlela yokuphucula amaqonga abo. Ngelixa kulungile ukuba namawaka ezinto eziguquguqukayo ukunika ingxelo ngazo, ukuqonda ukuba zeziphi izinto eziguquguqukayo ezinefuthe kwishishini lakho kunzima kakhulu. Kwaye nokuqonda ukuba zeziphi izinto eziguquguqukayo ezicela umbuzo wendlela yokuhambisa inaliti. Iiplatifomu zohlalutyo zihlala zibonakala ngathi zivelisa imibuzo emininzi kuneempendulo.
Iimpawu zamanqaku eTidemark ziimiboniso ezinokuthi zichaze ngamandla ibali lenkampani. Ezi "actiongraphics" zidibanisa inkqubo yakho, idatha, kunye nedatha engaphandle kweendonga zakho ukukunika umfanekiso opheleleyo weshishini. Banikezela ngolwazi lokuqonda kunye nefuthe kwimpilo yakho iphela, kubasebenzi, kuthiwani ukuba ukulinganisa, inzuzo kunye noqikelelo lweendlela.
I-Tidemark luLawulo lweNtsebenzo yoShishino olwakhelwe iLifu. Nalu ushwankathelo:
Kwindawo yabo, iTidemark ihambisa usetyenziso lohlalutyo olwenzelwe ukukhawulezisa ukuthunyelwa kwakho. Izicelo zabo zisebenzisa iqonga lesicelo elinamandla kunye namandla olawulo lwentsebenzo eyakhelweyo ngaphakathi, ekuqinisekiseni ukuba ungamisela ngokukhawuleza kwaye ngokulula usetyenziso lwethu kwiimfuno zakho zeshishini.
Cwangciso lwezeMali -Yila izicwangciso kunye noqikelelo ukunceda ukuqhubela ishishini kwiinjongo zakho. Ucwangciso lwezeMali lubandakanya iinkqubo zokucwangciswa kwengeniso, ukucwangciswa kwabasebenzi, ukucwangciswa kweendleko zokusebenza, ukucwangciswa kwenkcitho yemali, kunye nebhalansi kunye nokucwangciswa kokuhamba kwemali, ukuqinisekisa ukuba ufumana umfanekiso opheleleyo wezicwangciso zakho zezemali. Ngokusebenzisana kwimeko kunye nohlalutyo, ungalukhawulezisa uqikelelo olutsha njengoko ishishini lakho litshintsha.
UCwangciso lokuSebenza -Qhuba ishishini lakho ngokufaka igalelo kubantu abasondeleyo kwiimveliso nakubathengi. Ukucwangciswa kokuSebenza kukuvumela ukuba uqokelele abaqhubi bokusebenza ukuze bavelise uqikelelo lwezezimali kunye nezicwangciso, zikuvumela ukuba ubone lonke isicwangciso seshishini. Ukuqhagamshela ukusebenza nokucwangciswa kwemali kuqinisekisa ukuba wonke umntu osebenza kumbutho usebenza ngolwazi olufanayo kwiinjongo ezifanayo.
Ulawulo lweMetric -Kuvavanye ngokukhawuleza ukusebenza kombutho wakho wonke kwaye uthathe amanyathelo xa kufuneka njalo. Isicelo sethu soLawulo lweMetriki sikunceda ukuba wenze uhlalutyo lokwahlukahlukana ukwahlulahlula imiba, ukuqokelela iithagethi zemetrikhi kunye neyona yona ayifumaneki kwiinkqubo zomthombo, sebenzisana kwimeko yenkqubo yakho yohlalutyo, kwaye ujonge ifuthe kwiziphumo zemali.
Izicelo zeTidemark zabelana ngeqonga lesicelo elisekwe kwilifu elinikezela ngesakhelo sokuqinisekisa ukuba zonke iiapps zethu zibonelela ngemeko kunye nokusebenza.
tags: iideshibhodiUlawulo lwentsebenzo yeshishinikpisamabali amabaliuphawuiindaba zamabali endaba
Yintoni ethandwa nguFacebook ngathi
LeadSift: Sebenzisa ukuThengiswa kweNtlalo ukuze ufumane iiNkokeli